4 Amacebo Ukuze Fumana Elona Out Of Your Train Journey | Gcina A Isitimela
ekhaya > Iingcebiso zokuhamba > 4 Amacebo Ukuze Fumana Elona Out Of Your Train Journey
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 06/03/2021)
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ehamba ngololiwe, akukho kwamathandabuzo iyakuba yokuqala abaninzi. Honestly, Nabani na onikwe ithuba lokuhamba ngololiwe ithuba uye waphambana kwaphela kulo! Ngoba? Ngokuba awuve! Ngokwahlukileyo ekhwela moya engenabuntu, ezithathwa ibhasi elibuhlungu, okanye indlela-inoxanduva lokukhwela imoto, uhambo train ekhuselekileyo, ekhawulezileyo kodwa emangalisayo ebukekayo yothando. Omnye unokuphikisa ukuba ukuhamba ngololiwe ngumxube wokwenene waseVirginia Woolf ongekhoyo kunye nokusebenza kwale mihla. Ah, uya kubona ukuba sele.
Ekubeni sele bazilungisa itikiti lakho - apha the best 4 amaqhinga ukufumana okuninzi uhambo lwakho uloliwe:
Hlala Kude Laptop wakho & phone
Singathanda sincoma uphephe Nijonge laptop yakho yonke uhambo, njengoko uya ilahlekelwa kangaka! kunokuba, Jonga kokukujikelezile, ubone ukuba kwenzeka ntoni; kunandipha umbono window kunye uhlobo okumangalisayo ngaphandle. Qwalasela abantu baxhontele kuwe, uze ucinge ngezinto awunalo idla ngokuba ixesha lokwenza. Yeyona ithuba lokuyenza ityhefu nya izixhobo zakho zemihla ngemihla Uwole nokuntsonkotha omhle a Train Journey ukuba – kuphi.
Nandipha ezintsha ze-Train Journey
Ngeke sikwazi ukuqinisekisa ukuba kuya kufuneka ukuba UEthan Hawke – Julie Delpy Train Journey imeko kwi lokuqala sakho train ride (Oh, ima kancinci, siye sonke ozibonileyo Ekutyhafeni phezu I Ngaphambi Trilogy, ngasese, enethemba siyakuba ibali uthando olufanayo kwenzeka kuthi.) Yaphula aphume iqokobhe lakho yaye amava kwenzeka. Zingaphi abanengqondo, ngokusindleka, nokuncokola fun uya kuba? Amava kunye nokufumana ukusebenzisana nabantu beentlanga ezahlukeneyo yimvakalelo fantastic! Ngeke wazi ukuba ezininzi ngabangane bazigcinela, zingaphi iibhrashi oza kuba nazo, okanye bangaphi abantu abathandekayo oza kudibana nabo. Ukuba awunguye uneentloni kakhulu, kuba ngowokuqala ukwaphula kulengqele intetho kubantu ozithandayo.
Iindawo e Groups
Nothing beats traveling around and taking a Train Journey to your imizi ozithandayo eYurophu kunye neqela labantu ndiyakuthenda. Ewe, siyazi ukuba ucinga ntoni – Ndiza njani ezininzi ngokusebenzisa iminqweno wonke, izicelo, wonke umoya, pre-izicwangciso kwiindawo – kwaye thile nawe ngaloo. kodwa, le nto – ukuba ulungiselela kakuhle kwaye intetho onyanisekileyo phambi kokuba siqalise kule hambo, izinto ziza kuba bhetele kunokuba uyakucinga.
Ukuhamba ngokwamaqela nangeentsuku ezikhethekileyo lihlisa ixabiso kakhulu ukuba itikiti Isitimela (ewe, okunene uyakwazi ukufumana isaphulelo kwi itikiti lakho ukuba, bathi, Trenitalia ukuba uya ku ngeempelaveki). Inika umntu ukuba abelane ngamava kwaye abone izinto ezivela kwabanye abantu. leyo, yaye – ukunxila kwilizwe langaphandle laseYurophu ingcono nakanjani phakathi kwabantu obaziyo kunokuba benza khona solo… silungile, okanye sinyanisile?
Qala i Train Journey Journal & Thatha imifanekiso
Enye yeendlela eziphambili ukusebenzisa ixesha lakho kuloliwe kukuba ukuqala ijenali ukubhalwa kwakho amava. Thina sonke ndlela kakhulu zisongelwe izifundo zethu, ukuphila ofisi, iingxaki zemihla ngemihla ukuba ngokuqhelekileyo silibale ukuba kuphuma loo isakhelo ingqondo eziyingxaki kwaye ziphefumla owesibini. Ukubhala journal uya kukunika nombono izinto, ingakumbi xa ubuyele kulo emva kwexesha. Plus, iza kuba memory elihle ngohambo lwakho, khumbuzo izinto ofuna ukuba uzive / ucinga / amava kwakhona.
Yonwabela yakho uhambo ngololiwe, zinike imvume yokuphumla, kwaye wamkele yonke into malunga nohambo lwakho lukaloliwe! Eyona ndawo inokuthenjwa yoku-odola amatikiti etreyini yakho saveatrain.com Ngokuqinisekile, njalo – uthole movin '!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-journey-4-tactics%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
amacebiso train Travel traveltips